Is qorida barnaamijka dib u isticmaalka walxaha orgaaniga ah - City of Minneapolis
Ka bood boodhka U gudub 311 I caawi
Ku noqo Bogga Hoyga Ingiriisiga
Is qorida barnaamijka dib u isticmaalka walxaha orgaaniga ah
Mulkiilayaasha guryaha iyo kireystaasha la leh adeega qashin qaadida Magaaladda (City)
Haddii aad leedahay caagag qashin oo leh midab dambasi ah oo ay ku dhagan tahay calaamada “Hanti Magaaladda Minneapolis” (City of Minneapolis), waxaa leedahay adeega qashin qaadida ee magaaladda, waxa aadna isu diiwaan gelin kartaa barnaamijka dib u isticmaalida walxaha orgaaniga ah iyadoon wax kharash oo siyaado ahi kaaga bixin. Waxaa jira labo siyaabood oo la isugu diiwaan geliyo barnaamijka dib u isticmaalka walxaha orgaaniga ah:
Isticmaalida foomkayaga is diiwaangelinta ee khadka (online) ka
Soo wac ama emayl u soo dirid xafiiskayaga
Waxa aanu kuu keeni caag doog ah oo dib u isticmaalida walxaha orgaaniga ah ka dib kolka aad is-gorto.
Waxaad kaloo ku heki doontaa boostada alaabta diyaarsan ee soo dhaweyn ah.
Xirmada diyaarsan ee soo dhaweynta ah waxaa ku jira:
Hage ku saabsan dhisida orgaaniga
Bir lab gaboojiyaha lagu dhajiyo
Baco duub ah oo nooca bedelma ah oo hawsha lagu bilaabo
Kiraystayaasha cusub ee dhismayaasha Magaaladda (City) la leh adeeg qashin qaadid ee jaa horey u lehaa caaga qashinka ee dooga ah ee walxaha orgaaniga ah ee dib loo isticmaalo waxa ay la soo xiriiri karaan xafiiskayaga si ay uga codsadaan xirmada alaabta diyaarsan ah ee soo dhaweynta.
Orgaanigu waa khasab inuu ku jiro baco ay sugtay hay’ada BPI inay bedelmi karaan ama dambiisha warqada ka sameysan ee cuntada adeega ah lagu rito. Caagaaga dooga ah waxaa la faaruqin asbuuc walba maalinta qashinka.
Sida loo bilaabo aruurinta orgaaniga
Talooyin ah kala soocida orgaaniga
Baro waxa lagu ridiyo caaga
Codsiga caag siyaasadda ah
Walxaha orgaaniga ahi waa khasab inay geli karaan caagaaga. Haddii caagaagu uu mar walba buuxsamo, la soo xiriir xafiiskayaga si aad u codsato caaga weyn ama aad u hesho caag kale. Haddii marmar aad leedahay orgaanig siyaado, waxa aad geyn kartaa meesha la geeyo orgaaniga.
Kiraystayaasha aan lahayn adeega Magaaladda (City)
Haddii dhismahaagu uu leeyahay haan qashin, waxa aad leedahay qashin qaade gooni ah magaciisuna waa inuu ku dul qornaado haanta.
Waxa aad haystaa labo waxyaabood oo aad kala dooran karto oo ku saabsan walxaha orgaaniga dib u isticmaalka ah:
Isqor si aad u geyso orgaaniga guryaha meesha la geeyo orgaaniga.
Ma jiro wax kharash oo ku bixi isticmaalida meesha la geeyo orgaaniga.
Kala shaqee maamulaha gurigaaga in adeeg walxadaha dib u isticmaalka ee orgaaniga ah lagu daro dhismaha. Ka eeg qaybta Aruurinta qanshinka ee ganacsiyada iyo dhismayaasha waaweyn wixii kale ee akhbaar ah.
Dhamaan ganacsiyada oo dhan waxaa laga rabaa inay lahaadaan adeeg dib u isticmaal walxaha ah. Degmadda Hennepin (Hennepin County) waxa ay ka rabaa qaar ka mid ganacsiyada inay lahaadaan barnaamij ah leexinta cuntada hambada ah, sida dib u isticmaalida walxaha orgaaniga ah.
Ka eeg qaybta Aruurinta qanshinka ee ganacsiyada iyo dhismayaasha waaweyn wixii kale ee akhbaar ah.
Dib I isticmaalka walxaha orgaaniga ah - Sababtayda
Maqal sababta dad kale oo degan Minneapolis ay u bedelaan orgaanigooda, ka dibna ku biir iyaga hawshooda ah dib u isticmaalka walxaha orgaaniga ah.
Iimaylka Solid Waste & Recycling
Isniin - Jimcaha
Dhismahan waa mid u xiran dadweynaha.
Soo sheeg dhibaato
Xuquuqda daabacaadda ©
311 I caawi
Ma u baahan tahay caawimaad? Halkan ayaan kuu joognaa.
Weydii 311 wax ku saabsan adeegyada Magaalada ama ka warbixi dhibaatooyinka aan degdegga ahayn.
Noo soo dir e-mayl Na soo wac